Fikarohana tsara kokoa, valiny tsara kokoa: ResearchTech Platform Methodify | Martech Zone
Alakamisy, May 14, 2020 Alakamisy, May 14, 2020 Douglas Karr
Miorina dia sehatry ny fikarohana tsena mandeha ho azy ary iray amin'ireo vitsy eran'izao tontolo izao izay novolavolaina manokana ho fanatontosana ny fizotran'ny fikarohana manontolo.
Ny sehatra dia manamora sy haingana kokoa ny fidiran'ny orinasa amin'ny mpanjifa isaky ny dingana rehetra amin'ny fampandrosoana sy ny fizotry ny varotra hahafahana mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa. Rehefa vita izany, dia namboarina mba ho azo namboarina i Methodify, manome ny hevitry ny mpanjifa ny karazana vokatra, marketing, na fanandramana fanandramana - na dia ireo mbola tsy noeritreretin'izy ireo aza.
Miorina dia torontoronina rehefa nanao fitsapana hevitra miverimberina miaraka amin'ny banky lehibe indrindra any Kanada. Ny ekipa Methodify dia niatrika ny fanamby tamin'ny fanampiana azy ireo hanao fikarohana bebe kokoa momba ny mpanjifa nefa manome valiny avo lenta haingana kokoa.
Ny banky dia niatrika olana iraisan'ny orinasa ankehitriny - fotoana fohy hanodinana ny vokatra sy ny fampielezan-kevitra, vitsy ny loharanom-bola hiaraha-miasa ary ny fanapahana teti-bola lehibe. Na dia tian'izy ireo aza ny mampiditra matetika ny hevitry ny mpanjifa bebe kokoa amin'ny dingan'izy ireo, dia fantatr'izy ireo ihany koa ny foto-kevitra nentin-drazana, ny doka ary ny fanandramana famolavolana fonosana izay misy fanadihadiana lalina sy sarotra izay mety ho miadana sy lafo.
Andao hametraka ny sahan-kevitra manodidina an'io: ny fikambanana dia maniry ny hanohana fanapahan-kevitra bebe kokoa amin'ny alàlan'ny angon-drakitra, manery mafy ny ekipan'ny fikarohana sy ny fanadihadiana tsy ampy. Ary fantatray fa ny fametrahana ny enta-mavesatry ny fikambanana amin'ny mpiasa vitsivitsy dia fomba iray hanamboarana ny loza.
Izany dia mitarika any amin'ny ekipa marketing maka hitsin-dàlana ary mampiasa fitaovana fikarohana toy ny fitsapan-kevitra amin'ny Facebook mba ahazoana valin'ny hevitry ny mpanjifa. Ireo teknikan'ny DIY ireo dia matetika misy ny biraom-pifidianana tsy ara-tsiansa, izay manimba ny fomba fikarohana voaporofo, tsy miraharaha ireo mason-tany demografika ary mampitombo ny mety ho fitongilanana sy ny fanontaniana mitarika.
Raha tokony hiezaka ny hivily lalana amin'ny fomba fikarohana siantifika i Methodify dia mitady ny hanampy ireo marika hampifantoka ny ezak'izy ireo amin'ny fampidirana ny mpanjifany mandritra ny fizotran'ny vokatra sy ny varotra.
Hiatrehana ireo olana ireo Miorina dia natao ho sehatra izay:
Mamela ny mpivarotra hizaha toetra mialoha sy matetika (mandray fomba fanao amin'ny fitsapana-sy-mianatra izay manome valiny haingana - tsy miandry fampandrenesana lehibe iray volana aty aoriana);
Mampiditra ny mpanjifa amin'ny resaka amin'ny dingana rehetra amin'ny fampivoarana ny vokatra sy ny marketing;
Mametraka henjana amin'ny fizotry ny fikarohana.
Ahoana no fomba hahatratrarana ny tanjona lehibe
Mba hanomezana fahafaha-manao fitsapana matetika kokoa, Miorina dia miorina manodidina ny filozofia mailaka. Amin'ny fotony fototra, i Metodify dia manome antoka ny valin'ny fikarohana haingana amin'ny vidiny mahomby. Ny fomba fiasa ao amin'ny orinasa dia manome ROI tsara kokoa ho an'ny mpivarotra sy ekipa fahitana, mamelona azy ireo amin'ny valin'ny hevitry ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanadihadiana fohy sy 5-10 minitra mifanohitra amin'ny fanadihadiana nentim-paharazana 45 minitra izay maharitra herinandro maromaro.
Mba hametrahana henjana ny fizotry ny fikarohana, ry zareo boaty mainty fomba fiasa voaporofo izay nosoratan'ny mpikaroka nahazo fankatoavana. Ny fomba fametrahana fanontaniana, ny filaharana misy azy ireo; tsy misy olona afaka manova an'io fomba fiasa io. Izany dia miantoka ny benchmarking sy ny algorithma hijanona tsy miova. Na izany aza, ny marika dia afaka mangataka ny hanokatra sy hanova fombaika, mamorona fomba vaovao vaovao eo amin'ny lampihazo. Ny marika ihany no afaka miditra amin'io fomba vaovao io.
Fandinihana tranga iray
Iray amin'ireo marika whisky be mpividy indrindra any Kanada, JP Wiser's, izay novokarin'i Corby Spirit and Wine Limited, nampiasa Methodify hanampiana amin'ny famolavolana sy fanovana ny iray amin'ireo fampielezan-kevitra be mpitia indrindra natomboka tao amin'ny indostrian'ny alikaola - Hold it High, izay nanome ny olona fotoana ahafahana mifampihinana amin'ny fomba marobe .
Tamin'ny nanombohan'ny drafitra fampielezan-kevitra, JP Wiser dia nanangana ekipa iray ahitana mpiara-miombon'antoka masoivoho avy amin'ny taranja samihafa ary — ny kofehy namboarina tamin'ny alàlan'ny dingan'ny fandrindrana ny fampielezan-kevitra — ny sehatra fanandramana sy fanatsarana azy ireo, Methodify.
Farany, ny marika dia te-hanome aingam-panahy ny kanadiana manerana ny firenena hametraka ny fotoana mitovy sy hikarakara ny fisakaizan'izy ireo rehefa mametraka ny whisky. Mba hanaovana izany, ny ekipan'ny masoandron'izy ireo dia namorona ny hevitra hamoahana ny fampielezan-kevitra voalohany natolotry ny mpampiasa ho an'i JP Wiser, izay manome ny mpanjifa ny fotoana hitadiavana am-pahibemaso ny sakaizany amin'ny takelaka fisoratana sy radio ary media sosialy. Tsy nahalala izay karazana toast ho azony izy ireo ary ireo fantsom-pifandraisana ahafahana mampita izany tsara indrindra, dia nampiasain'izy ireo i Metodify mba hanaovana fitiliana sy fanatsarana izay hahitana fahombiazana amin'ny fampielezan-kevitra. Amin'ny alàlan'ny fampiasana Metodify hitondrana matetika ny feon'ny mpanjifa mandritra ny fampandrosoana dia tamin'ny farany ny fampielezan-kevitra natao ho an'ny mpanjifa, nataon'ny mpanjifa.
Satria ny valiny dia azo atolotra ao anatin'ny 1-2 andro, ny mpiara-miombon'antoka tsirairay dia afaka nampiditra ny hevitr'ireo mpanjifa avy hatrany tao anatin'ny drafitra nomanin'izy ireo. Raha tokony hanakana ny fivoaran'ny famoronana dia natao haingana kokoa ny fikarohana.
Anisan'izany ny fitsapana ny fikarohana momba ny tsena
Fitsapana faritany: Notsapaina faritany mpamorona isan-karazany mba hamaritana izay lalana nihaona indrindra tamin'ny tsena kendrena
Fitsapana famonoana taktika: Nodinihina izay tetika ao anatin'ny faritry ny mpandresy izay notadiavin'ny tanjona indrindra, na amin'ny fiteny anglisy na frantsay.
Mampiasa sehatra mailaka toa Miorina ny fandraisana fanapahan-kevitra mandritra ny fizotry ny varotra dia nanome fampahalalana ho an'ny ekipa mpivarotra JP Wiser fa mety tsy nanandrana tamin'ny mpanjifa raha tsy izany. Ohatra, tsy nisedra faritany misy fotokevitra izy ireo alohan'ny hidirany amin'ny sehatry ny fikarohana mailaka mailaka, saingy hita fa manakiana izany satria ireo mpanapa-kevitra lehibe ao Corby dia mizara ny faritany natolotra voalohany. Izy io koa dia nanampy tamin'ny fanaovana laharam-pahamehana ny tetika an-tserasera, ivelan'ny toerana ary fanandramana nampiasaina tamin'ny fampielezan-kevitra miorina amin'ny valintenin'ny mpanjifa.
Ny fampielezan-kevitra sy ny marika dia hita fa firoboroboan'ny fitomboana matanjaka vokatr'izany, fa ny vokatra tena misy dikany dia avy amin'ny tantaran'ny tena manokana sy ny fiatraikany teo amin'ny fifandraisan'ny olona. Avy amin'ny volavolan-dalàna amin'ny takelaka fisoratana anarana any Toronto mankany amin'ny toast mivantana miaraka amin'ny fihavanana amerikanina-kanadiana, misy olona 50 amin'ny lafiny roa amin'ny sisintany ao Detroit, Michigan ary Windsor, Ontario, trano fonenan'i JP Wiser.
Famaritana ny fanavahana
Misy faritra efatra izay miavaka amin'ny Metodify amin'ireo mpifaninana:
Misy filàna mazava ny sehatry ny fikarohana an-tserasera izay manome haavo matanjaka mitovy amin'ny fanangonana tahirin-kevitra mahazatra ary manome interface mora ampiasaina toy ny ankamaroan'ny vahaolana DIY ankehitriny.
Fahaizana manamboatra ny sehatra ho an'ny orinasa;
Amin'ny maha-iray amin'ireo niditra voalohany teo amin'ny tsenan'ny automation, ny Methodify dia mametraka fenitra ary manavao ny ho avin'ny fikarohana tsena mandeha ho azy;
Taranaka 20 taona eo amin'ny sehatry ny indostria eo anelanelan'ny orinasa mitazona an'i Methodify, Delvinia, ary ny AskingCanadians, tontonana fanangonana angona an-tserasera;
Ny fanoloran-tena amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana hitohizan'ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny orinasan-dreny, Delvinia.
Midira ho an'ny Demo Methodify
Tags: bankybmofintechfikarohana fintechjd hendrysehatra fikarohana eny an-tsenamanamboatrafikarohanaresearchtech